सन् २०१९ मा सर्वाधिक व्यापार गर्ने फिल्ममा ‘वार’पहिलो नम्बरमा – E Kutumba
सन् २०१९ मा सर्वाधिक व्यापार गर्ने फिल्ममा ‘वार’पहिलो नम्बरमा
By ईकुटुम्ब	 On Dec 31, 2019 0
हरेक वर्ष झैँ सन् २०१९ मा पनि बलिउड फिल्म उद्योगमा कयौँ फिल्महरु रिलिज भए । तीमध्ये केही फिल्मले दर्शकको मन जित्न सफल भए ।केहीले, बक्सअफिसमा शानदार प्रदर्शन गरे भने, केही फिल्म फ्लप सावित भए । आज हामी वर्ष २०१९ मा रिलिज भएका तथा बक्सअफिसमा सर्वाधिक व्यापार गर्न सफल १० फिल्मबारे चर्चा गर्दैछौँ ।
वारकमाई ३१८ करोडवर्ष २०१९ को अक्टुबर २ मा रिलिज भएको फिल्म ‘वार’मा अभिनेता ऋतिक रोशन र टाइगर श्राफले पहिलो पटक एकसाथ काम गरेका छन् । ऋतिक र टाइगरको एक्शनलाई दर्शकले पनि खुबै रुचाए । यही कारण वर्ष २०१९ मा यो फिल्म सर्वाधिक व्यापार गर्न सफल रह्यो । कबीर सिंहकमाई २७८.२४ करोडअभिनेता शाहिद कपूर र कियारा अडवाणीको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म ‘कबीर सिंह’ २१ जून २०१९ मा रिलिज भएको थियो ।शाहिद कपूरले निभाएको एक पागल प्रेमीको भूमिकालाई दर्शकले निक्कै मन पराए । तसर्थ, यो फिल्मले बक्सअफिसमा सबैभन्दा धेरै व्यापार गर्ने फिल्मको सूचिमा दोस्रो स्थान बनाउन सफल भयो । उरीः द सर्जिकल स्ट्राइकनिर्देशक आदित्य धरको निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘उरीः द सर्जिकल स्ट्राइक’ बक्स अफिसमा मात्रै नभई बलिउडको अहिलेसम्मकै सर्वाधिक नाफा कमाउने फिल्म बनेको छ । अभिनेता किक्की कौशलको मुख्य भूमिका रहेको यो फिल्म जम्मा २५ करोड भारुमा बनेको थियो ।तर, यस फिल्मले बक्सअफिसमा २४५।३६ करोडको व्यापार गर्‍यो । अर्थात फिल्मले २२०.३६ करोडको मुनाफा कमायो । यसका साथै, उरीः द सर्जिकल स्ट्राइक वर्ष २०१९ को सर्वाधिक व्यापार गर्ने फिल्मको सूचीमा सामेल भयो ।
भारत कमाई २०९.३६ करोडअभिनेता सलमान खानको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म ‘भारत’ जून ५, २०१९ मा प्रदर्शन भएको थियो । यस फिल्ममा सलमान खानका साथै अभिनेत्री कट्रिना कैफ र सुनील ग्रोवरको मुख्य भूमिका रहेको छ । हाउसफूल ४कमाई २०६ करोडवर्ष २०१९ को अक्टुवरमा रिलिज भएको फिल्म ‘हाउसफूल ४’ले दर्शक तथा फिल्म समिक्षकबाट प्रशंसा भन्दापनि आलोचना बढी कमायो । तर, बक्सअफिसमा भने फिल्मले राम्रो व्यापार गर्न सफल भयो । फिल्ममा अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बबी देवल, कृति सेनन, पुजा हेगडे, कृति खरबन्दाको मुख्य भूमिका रहेको छ । मिशन मंगल कमाई २००.१६ करोड फिल्म ‘मिशन मंगल’ भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन ९इसरो० का वैज्ञानिकहरुको कहानीमा आधारित फिल्म हो । २०१९ को अगष्टमा रिलिज भएको यस फिल्ममा इसरोको मंगल ग्रहसम्मको सफल आरोहणलाई देखाइएको छ ।फिल्ममा अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा लगायतका कलाकारहरुको मुख्य भूमिका रहेको छ ।
के हो तमु ल्होसार? कसरी मनाईन्छ?
‘मिस्टर नेपाल २०१९’ का विजेता सन्तोषलाई हिरो हुने इच्छा
ललितपुरमा भेटियो कपनको ढलमा खसेका बालकको शव
बगनासकाली गाँउपालिकाको नेपाली काग्रेस सभापतिमा थानेश्वर तिमिल्सेना
रिब्दीकोटका किसानलाई मौरीपालनकोलागी आवश्यक सामाग्री वितरण